▷ Oculus Quest 3: Xanta, Saadaasha iyo Taariikhda Siideynta macquulka ah - 【Isbarbardhigga】 2022
Oculus Quest 3: Wararka xanta ah, Saadaasha iyo Taariikhda la sii daayo
Madax-madaxeedka cusub ee Oculus VR, oo ay u badan tahay Oculus Quest 3, ayaa sida muuqata ku jira horumar, kadib Madaxa Facebook Mark Zuckerberg ayaa xaqiijin doona Inta lagu jiro bisha Janaayo dakhliga soo gala shirkadda.
Inkastoo faahfaahinta mashruuca aan weli si rasmi ah loo xaqiijin, Zuckerberg ayaa u sheegay maalgashadayaasha, "Weli waxaan ka shaqeyneynaa qalab cusub. [kaas oo] la qabsan doona isla madal la mid ah, sidaas darteed macluumaadka ku socda Quest 2 waa inuu noqdaa mid hore u socon kara, marka waxaan dhisi doonaa saldhig ka weyn oo ku wareegsan agagaarka madax-madaxeedka VR ee aan haysano. »
Tani waxay siinaysaa aragtida ah in Oculus ay leedahay Facebook uu ka shaqaynayo beddelka Oculus Quest 2, kaas oo aan ku qeexnay dib u eegistayada inay tahay laga yaabee. "Madaxa dhegaha ee xaqiiqada dhabta ah ee ugu fiican ee abid."
Xogtu aad ayay u yar tahay waxa laga yaabo inay noqdaan marxaladaha hore ee horumarinta mashruuca, laakiin Hoos waxaa ku yaal wax walba oo aan ka naqaanno Oculus Quest 3, xaaladda dhabta ah ee dhabta ah iyo waxa aan rabno inaan aragno xiga.
1 Oculus Quest 3 taariikhda sii deynta
2 Oculus Quest 3 Sooc iyo Filashooyin
3 Oculus Quest 3 Qiime
4 Oculus Quest 3 saadaasha: Waxa aan rabno inaan aragno
4.1 Ka hortagga jirrada dhaqdhaqaaqa
4.2 Habboon ugu fiican
4.3 Bakhaarka Oculus ee la hagaajiyay
4.4 Meel bulsho oo hawo xaafadeed leh
4.5 Wadaagista warbaahinta
5 Wadada hor marta Oculus Quest 3
Oculus Quest 3 taariikhda sii deynta
Ha filanin Oculus Quest 3 inuu yimaado ilaa 2022; iyadoo la sii daayay Quest 2 Oktoobar 2020, hal sano iyo badh ka dib markii asalka ahaa, Quest 3 waxay u badan tahay inuu raaco jadwal la mid ah.
Waan layaabi lahayn markaan aragno inay bilaabmayso 2023, iyadoo la tixgelinayo rabitaanka cad ee Facebook inuu isku muujiyo inuu yahay goobta uu ka dhashay ciyaaraha guud ee VR.
Oculus Quest 3 Sooc iyo Filashooyin
Marka la eego horumarka Quest 2 uu ka sameeyay kii ka horreeyay, waxaan filaynaa in Quest 3 uu sii ahaado madax-madaxeedka VR ee taagan oo leh horumarintii caadiga ahayd nolosha batteriga, awoodda habaynta, iyo waxqabadka. Quest 2 wuxuu leeyahay muuqaal 50% ka af badan qalabkii asalka ahaa, kaas oo wuxuu u dhigayaa bartilmaameed cajiib ah Quest 3.
Quest 2 wuxuu kaloo kordhiyey heerka soo kicinta ilaa 90Hz marka loo eego kii asalka ahaa ee Quest's 72Hz.In kasta oo aynaan filaynin inaan ku aragno koror weyn (haddii ay jiraan) aalad cusub marka la eego in cinwaannada VR-da intooda badan aysan weli taageerin heerarkan soo kicinta sare.
(Sumcada sawirka: Oculus)
Waxaan sidoo kale arki karnaa isbeddelada qaabka qaabka, laga yaabo inay sii yarayso miisaanka ama diiradda saaraan isbeddelada la xidhiidha raaxada. Waxaan hubnaa in software-ka la cusboonaysiin doono si loo hagaajiyo dabagalka gacanta wakhtigan sidoo kale, halka nooca falcelinta haptic-ka ee aan ku aragno kontaroolaha PS5 DualSense ay u egtahay inay hagaajin karto khibradaha VR haddii ay sameyso. Labada qof ee Quest ee koontaroolayaasha si weyn.
Si kastaba ha ahaatee, Sifada Quest 3 oo ah mid aan laga maarmi karin ayaa noqon doonta ku biirideeda nidaamka deegaanka ee Facebook., taas oo macnaheedu yahay in aad u baahan tahay akoon Facebook ah si aad u gasho goobta. Shuruudahan macneheedu waxa weeye in aad mar kale hoos iman doonto habdhaqanka la socodka xogta Facebook., markaa haddii aad akhlaaq ahaan ka soo horjeedo hababka xog ururinta Quest 2, nasiib baad leedahay.
Oculus Quest 3 Qiime
Immisa ayaa ku kacaya moodelka Oculus Quest 3? Oculus Quest 2 wuxuu ku yimaadaa laba nooc: moodel leh 64GB oo kaydin ah, oo qiimihiisu yahay €299/€299/AU$479, iyo nooca 256GB ee €399/€399/AU$639.
Taasi waa kayd muhiim ah oo laga helay qiimihii uu qaabkii asalka ahaa ee heerka gelitaanka Oculus Quest ku furay iibka.. Ma filanayno a Quest 3 aad ayuu uga jabnaa, oo waxaan aragnay Oculus oo qaatay qiime isku mid ah, istaraatiijiyad tafatiran oo ka wanaagsan marka laga soo cusboonaysiinayo Oculus Rift oo loo beddelayo Rift S.
Ogaanshaha qorshayaasha Facebook ee qalabka sida aaladda guud ee VR, waa shay aamin ah oo uusan ka qaalisan doonin qaabka hadda Quest 2.
(Sumcada sawirka: Oculus / Facebook)
Oculus Quest 3 saadaasha: Waxa aan rabno inaan aragno
Dib u eegisteena Oculus Quest 2, way adkeyd in qalad laga helo madax-madaxeedka VR kaas oo cadeeyay i dhexgalka, raaxada, iyo fududahay in la isticmaalo. Si kastaba ha ahaatee, inkastoo si cad u hogaaminaya xirmada ee suuqa dhabta ah ee dhabta ah, waxa ay wali la kulmeysaa qaar ka mid ah hagardaamooyinkii saameeyay tignoolajiyada guud ahaan. Waa kuwan liiska cusbooneysiinta aan rabno inaan ku aragno Oculus Quest 3:
Ka hortagga jirrada dhaqdhaqaaqa
Mid ka mid ah khadadka tignoolajiyada, oo laga yaabo in aan laga fursan karin, waa jirrada dhaqdhaqaaqa oo inta badan dhici karta marka la isticmaalayo wax kasta oo madaxa dhegaha ah ee xaqiiqada dhabta ah. Iyada oo ku xidhan dulqaadkaaga buuqa iyo humaagga, Quest 2 wuxuu keeni karaa dawakh. In kasta oo aysan jirin waddo cad oo weli laga dhigi karo madaxa VR ee ka hortagga jirrada dhaqdhaqaaqa, si kastaba ha ahaatee, waa wax aan jeclaan lahayn in lagu horumariyo Oculus Quest 3.
Habboon ugu fiican
Waxa la mid ah habaynta qalabka. Haa ok Quest 2 runtii waa miisaan raaxo leh oo madaxa ah, wali waxay noqon kartaa xoogaa claustrophobic si aad u hesho taam fiican oo adag. Mar labaad, tani waa dhibaato ku dhawaad ​​​​hal kasta oo madax-madaxeedka VR-ga ah ee soo food saara, iyo mushkilad aasaasi ah oo jiilka soo socda ee qalabka ay tahay inuu ugu yaraan isku dayo inuu si wanaagsan wax uga qabto.
Bakhaarka Oculus ee la hagaajiyay
Horumarka kale ee aan rabno inaan aragno waxaa ka mid ah Dukaanka VR Oculus oo aad waxtar u leh. In kasta oo u dhigma gudaha browser-ka iyo dukaanka-ku-guduhuba uu fududeeyo in la ogaado sii daayoo cusub oo lahelo ciyaaraha soo socda, dukaanka dhegta-guduhu waxa uu u muuqdaa in uu rogo laadhuuda apps-ka lagu soo bandhigay iyada oo aan sina loo ogaan. Si degdeg ah ugu soco macluumaad cusub Tani waxay adkeynaysaa in horay loo dalbado ciyaaraha oo la ogaado magacyo cusub oo la iibsado. Markaad isticmaalayso aaladda, taas oo lagama maarmaan u ah in la hubiyo in taleefoonnada dhegaha la gashado ay sii hayaan awoodda dib-u-ciyaarista.
Meel bulsho oo hawo xaafadeed leh
Iyadoo Quest 2 uu leeyahay nidaam martiqaad xisbi oo karti leh si aad ula ciyaarto asxaabtaada, ma jirto meel bulsheed oo aad kula falgasho kuwa kale. Waxay noqon lahayd mid xiiso leh in la arko Quest 3 oo soo bandhigaya goob bulsho oo macmal ah, oo la mid ah xariiqda NBA 2K xaafadda, si aad ula wadaagto wakhtiga dhimista dadka kale. Waa maxay alaabta guryaha ee dhowr qof oo maanta ku nool deegaanka guriga haddii aysan jirin cid la wadaagta?
Wadaagista sawir-qaadista iyo fiidyowyada aaladaha Oculus weligood may fududayn, waana arrin Quest 2 ay isku dayday inay wax ka qabato guul yar.. Waxaa jira caqabado kale oo yar oo aad wali u baahan tahay inaad nadiifiso ka hor intaadan wadaagin macluumaadkaaga VR, kaas oo inta badan si aan kala sooc lahayn loo qabtay, si kastaba Waxaan jeclaan lahayn Oculus 3 inuu wax walba ka dhigo mid la heli karo. Fiidiyowga 1080p, is dhexgalka abka, isku dhejinta maqalka saxda ah ayaa sidoo kale fiicnaan lahayd.
Wadada hor marta Oculus Quest 3
Halka ciyaarta VR ay tahay mid dhexdhexaad ah oo hubaal ah in ay caan ku noqotay sannadihii u dambeeyay (Quest 2 ayaa lagu soo waramayaa inuu helay shan jeer dalabyo horudhac ah kii ka horreeyay), looma tixgeliyo inay soo gashay suuqa caadiga ah weli.
Ugu yaraan taasi waa ra'yiga Mark Zuckerberg, oo la sheegay in 2018 uu sheegay in 10 milyan oo isticmaalayaasha VR loo baahan yahay si loo hubiyo in goobta Oculus ay tahay "mid waara oo faa'iido u leh dhammaan noocyada horumarinta". Si kastaba ha ahaatee, wuxuu ku daray "marka aan ka gudubno marinkaas, waxaan u maleyneynaa in waxa ku jira iyo nidaamka deegaanka ay kaliya qarxi doonaan" (sida RoadtoVR ayaa sheegaysa).
Sidoo kale waxaa jira dalool weyn oo suuqa ku yaal hadda oo Oculus Quest 3 uu isku dayi karo inuu buuxiyo. Tusmada Valve waa mid ka mid ah sameecadaha VR-ga ugu fiican ee aan tijaabinay ilaa hadda, laakiin yaraanta transistor-ka ayaa si wax ku ool ah u joojisay soo saarista aaladda sanadkii la soo dhaafay, taasoo adkeyneysa in la helo. Sidaa darteed, Aalad cusub oo Oculus ah ayaa wax ka baran karta guusha madax-madaxeedka Valve oo runtii iska dhex-abuuri kara warshadaha VR.
Dabcan, Wararka xanta ah ayaa sidoo kale wareegaya in madaxa Apple VR uu ku jiro shaqada (oo ay la socdaan baabuur Apple, muraayadaha smart, TV, iwm.), taasoo macnaheedu noqon karo tartan adag sanadaha soo socda. Si kastaba ha ahaatee, dhowr tikniko oo miisaan culus oo u tartamaya booska ugu sarreeya ayaa kaliya u noqon kara shay u wanaagsan ciyaaraha VR, marka waxaan rajaynaynaa waxa Oculus Quest 3 keeni karo.
Maanta heshiisyada ugu fiican ee Oculus Quest 2